Sida Loo Qoro Sharaxaada Meta ee Dukaamada Maxaliga ah | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/Sida Loo Qoro Sharaxaada Meta ee Dukaamada Maxaliga ah
Sida Loo Qoro Sharaxaada Meta ee Dukaamada Maxaliga ah
Weydii su'aasha SEO ee maanta waxay ka timid Sussana ee Guatemala. Sussana way waydiisay:
"Waa maxay habka ugu wanaagsan ee loo qori karo sharaxaad sax ah oo ku saabsan goobaha dukaamada? Ma inay ku jiraan lambarka taleefanka dukaanka?"
Waad ku mahadsan tahay su'aasha weyn, Sussana!
Ma jirto hab sax ah oo lagu qoro sharraxa meta ee goobta dukaanka, laakiin waxaa jira siyaabo badan oo khaldan.
Hoosta, waxaad ka heli doontaa waxa aanu samayno marka aanu samaynayno sharaxaada meta meelaha macaamiisheena. Mabaadi'daas isku mid ah ayaa sidoo kale khuseeya qaar ka mid ah alaabta, adeegga, iyo boggaga qaybta, sidoo kale.
Hal shay oo muhiim ah in la xuso ayaa ah in sharraxaadaha meta ay u badan tahay inaysan kaa caawin doonin inaad Google ka gasho xilligan.
Waxay kaa caawinayaan inaad hesho taraafig badan oo ku socda mareegahaaga qiimeyntaada, in kastoo.
Ka fakar cinwaanka meta inuu yahay xayaysiis kasbaday dareenka macmiilkaaga iman kara.
Cinwaanka waa inuu qofka ku soo jiitaa darajadaada ka dibna sharraxaaddu waxay u baahan tahay inay qofka ogeysiiso in haddii uu gujiyo mareegahaaga, ay heli doonaan waxay raadinayaan.
Hadda aan eegno qorista sharraxaadaha meta ee boggaga goobta.
Marka hore, u samee qaar ka mid ah xayeysiisyada Google iyo Bing haddii aad ku sugan tahay Mareykanka, ama matoorada raadinta ugu badan ee dalkaaga.
Tijaabi astaanta cinwaanka iyo isku darka sharaxaadda meta si aad u aragto waxa helaya qiimaha gujis ee ugu sarreeya.
Halkaas, waxaad ka cabbiri doontaa beddelka sifo labaad.
Hadafka xayeysiisyada PPC maaha dakhli; waa in la ogaado waxa ka dhigaya qofka wax raadinaya inuu kula macaamilo iyo si loo hubiyo in qofkani u bedeli doono hogaanka ama iibka.
Halkaa, waxaad ka shaqayn kartaa waayo-aragnimadaada bogga si aad u beddesho taraafikadan xitaa sare.
Waxyaabaha aad tijaabin karto waxaa ka mid ah ereyada muhiimka ah, lambarada taleefanka, lingo maxalliga ah, iyo calaamadaha caanka ah.
Marka aad ogaato waxa dadka ku keena in ay gujiyaan, waa waqtigii aad qori lahayd sharaxaadaada.
Calaamad qaadashada: Ka-qaybgalka badan macnaheedu maaha ganacsi badan. Dhab ahaantii, waxay kugu kici kartaa lacag.
Nambarada taleefanku waa muhiim haddii aad tahay adeeg ku saleysan oo aad leedahay macaamiil raadinaya inay ku hadlaan taleefanka.
Lahaanshaha koodka aagga ee iswaafaqaya waxa kale oo ay xaqiijin kartaa qofka aad tahay, dhab ahaantii, degaanka, mana ku dhegi doonaan nidaamka bangi telefoon oo wayn.
Isla mar ahaantaana, haddii aad tahay dukaanle ama makhaayad oo inta badan wicitaanada ay ku dhamaadaan soo celinta ama su'aalaha ku saabsan saacadaha, tani waxay kaa qaadaysaa inaad caawiso macaamiisha horeyba ugu jiray dukaankaaga waxayna kugu kici kartaa lacag.
Waa kuwan waxa aan ka fekero oo aan ku daro markaan qorayo sharaxaadda goobta goobta dukaanka:
Ma jiraan wax calaamado ah oo ay tixraacaan dadka deegaanku?
Waxaa laga yaabaa in magaca waddo uu yahay AB laakiin dadka deegaanka ayaa u yaqaan XY.
Waxaan u tixraaci lahaa goobtayada XY sida 1, 2, iyo 3, marka loo eego. magaca wadada rasmiga ah.
Way gaar u tahay oo si toos ah ayay ula hadashaa macmiilkaaga iman kara. Haddii aad tahay hoteel oo aad u adeegto dalxiisayaasha, waxaa laga yaabaa inay fiicnaato inaad isticmaasho magaca dhabta ah.
Ma ka jawaabi karnaa su'aasha ugu badan oo aan bixin karnaa xal?
Haddii su'aalaha ugu badan ay yihiin saacadaha shaqada ama ballan samaynta, beddelka lambarka taleefanka, waxaad tidhaahdaa, "Jadwalka ballantaada M-F inta u dhaxaysa 9 iyo 3 ee goobta AB."
Jawaabtaani waxay caddaynaysaa waxa uu qofku samayn karo waxayna wax ka qabanaysaa welwelka isticmaalaha.
Calaamadda cinwaanku waxay yeelan doontaa ereyo fure ah iyo macluumaad laxiriira sida "Farmasiga Logan Circle Pharmacy" ama "Bakhaarada Hardware ee Waqooyiga Austin."
Sharaxaaddani miyay keeni doontaa ganacsi cusub?
Sida kuwa kor ku xusan, waxa laga yaabaa inaan rabno inaan ku toosno caawinta iyo taageerada su'aalaha ku saabsan ama lala xiriiro bogga halkii aan ka ahaan lahayn hogaanka iyo maabka iibka.
Haddii nambarka taleefoonku uu beddelo hoggaan badan, markaa waxaan gabi ahaanba halkan ku dari karnaa.
Si sax ah ma u sharaxnay waxa uu qofku heli doono hadii uu ku talaabsado?
Tani waa tan ugu muhiimsan.
Haddi aanad qeexin ujeedada bogga iyo sida uu booqdahaaga iman kara uga faa'iidaysan doono, waxa ay u badan tahay in aad ku dambayn doonto soo kabasho.
Hubi in sharaxaaddaada iyo waayo-aragnimadaada bogga ay iswaafaqayaan si ay u caawiyaan in qofku aanu kaliya soo booqan bogga goobtaada, laakiin uu sidoo kale kula macaamilo.
Xilliyeedku wuxuu kaa caawin karaa abuurista Sharaxaadaha Meta ee Weyn, sidoo kale!
Hal tilmaan oo gunno ah oo weyn ayaa ah inaad la baxdo xilliyeed sifadaada meta haddii aad tahay dukaan maxalli ah ama bixiye adeeg.
Garaashyada baarkinka ee agagaarka garoonku way isbedeli karaan iyadoo lagu salaynayo xilliga; "U dhowow Wizards Washington" inta lagu jiro xilliga kubbadda koleyga iyo "Ku dhawaad ​​Ciyaaraha Koofiyadaha" ee xeegada, tusaale ahaan.
Beeruhu waxay sheegi karaan xilliga cherry ee guga iyo xilliga bocorka ee dayrta. Waxyaalaha qaarkood waa sannadka oo dhan sida safarro waxbarasho, laakiin yoolalka dhabta ah ee isticmaalaha isbeddelka iyo sharraxaadda meta waa habka ugu habboon ee lagu wadaago in goobtaadu leedahay xalka saxda ah.
Goobaha dhacdooyinka waxay ka hadli karaan aroosyada xagaaga iyo xafladaha shirkadaha ee jiilaalka.
Sawirqaadayaashu waa inay diirada saaraan sawirada sare iyo aroosyada guga, ka dibna u rogaan fasaxyada iyo caleemaha qoyska ee dayrta.
Ka fakar sidaad u siin lahayd jawaab ku habboon waxa uu qofku raadinayo oo uga dhigo mid soo jiidasho leh.
Taasi waa waxa ka dhigaya sharraxaad meta wanaagsan oo ka soo horjeeda shay la booday.
Waxaan rajaynayaa in this ka caawisaa!
10 Qalad oo laga Fogaado Markaad Qoreyso Sharaxaada Meta
Sida Loo Soo saaro Magacyo Tayo & Sharaxado Meta Si Toos ah
Isbeddellada SEO ee 10 ee muhiimka ah waxaad u baahan tahay inaad ogaato
Waxaa jiri kara mid keliya: Magacaabid hadda waxay u furan tahay waalan Torque's Plugin Madness 2021
Hootsuite Hacks: 19 khiyaano iyo astaamo aadan malaha garanayn